Ukuphakama kwamaseli amhlophe egazi emcimbini ngesikhathi sokukhulelwa
Owesifazane okhulelwe kanye nempilo yakhe ihlale ingaphansi kokulawulwa kwabesifazane bokubeletha, umsebenzi oyinhloko wokuvimbela izinkinga ezilindeleke omama esikhathini esizayo cishe zonke izinyathelo. Ngakho-ke, abesifazane abasesimweni esithakazelisayo baqokwa ukuvakashelwa njalo, lapho odokotela bengakwazi ukunquma ukuphambana okuncane kakhulu ngesilinganiso sokukhulelwa. Kuphela lapho odokotela bangathatha izinyathelo eziphuthumayo futhi bavimbele usongo empilweni yomama ozayo kanye naye, engakazalwa, umntwana. Ukuvakasha okusha kwesazi sokubeletha kudlula ngendlela efanayo futhi kuvame ukuqala ngokulethwa kwezivivinyo, kuhlanganise nokuhlolwa komchamo. Inombolo yamangqamuzana amhlophe egazi omama okhulelwe angatshela udokotela onolwazi okuningi kakhulu.
Ama-leukocytes emcinini wesifazane okhulelwe kufanele abe ovamile kusuka ku-8 ukuya ku-10 kwelinye i-μL. Uma udokotela athole inombolo eyamukelekayo yamaseli amhlophe egazi, kusho ukuthi izinso ziyasebenza ngokujwayelekile, futhi noma yiziphi izinqubo zokuvuvukala emzimbeni womama ozayo azikho. Uma kungazelelwe owesifazane ngaphambi kokukhulelwa komntwana wayegula nganoma yiziphi izifo ezihlobene nomsebenzi wezinkunzi, ngesikhathi sokukhulelwa kungenzeka ukuthi kwenzeke izinkinga ezihlukahlukene, ngakho-ke kubalulekile ukuthatha izinyathelo eziphuthumayo nokuvimbela imiphumela eyingozi nokungajabulisi. Ngokuvamile kwenzeka ukuthi owesifazane ngesikhathi ekhulelwe, lapho ephonsa umchamo ukuze ahlaziye, akaqapheli ngokucophelela ukuhlanzeka kwakhe, futhi lokhu kuthinta kakhulu ukuchithwa kwezivivinyo zomchamo. Ngenxa yalokho - ukwandisa amaseli egazi amhlophe emcimbini ngesikhathi sokukhulelwa. Ukuze uphumelele ukuthi kungenzeka ukuziphatha okungalungile kolunye uvivinyo, kufanele uhlale ugcina imithetho eyisisekelo yokuhlanzeka, okwamanje wonke umuntu ubonakala ekwazi.
Kodwa lapha uqaphela ngokucophelela imithetho yokuhlanzeka, futhi ngesikhathi sokuhlolwa unomthamo owengeziwe we-leukocytes emcinini. Kulesi simo, udokotela uzokunikeza ukuhlolwa okwengeziwe. Kulesi "preobsledovanii" uzobe ukhetha izinqubo ezikuvumela ukuba uhlole ukusebenza kwezinso nokutholakala noma ukungabikho kwezinqubo zokuvuvukala zalezi zitho. Udokotela uzodinga ukuthola ukuthi kukhona yini izifo ezithathelwanayo emzimbeni wakho.
Ukuxilongwa okuphelele komzimba wakho kuzosiza ekusunguleni izimbangela zokuhlola "okubi" futhi kuzokuvumela ukuba ukhethe izindlela ezifanelekayo zokwelashwa. Inombolo ekhuphukile yama-leukocytes emcintini wesifazane okhulelwe kungakabonisa ukuthi kwenzeke kanjani i-leukocytosis. Futhi ukuthuthukiswa kwalesi sifo kuyashesha, lesi sifo singamahora amabili nje kuphela, ngokuvamile lesi sifo sandulela ukuphuma okukhulu.
Njengoba kuyaziwa, ama-leukocyte ayiqembu elikhethekile lamaselula elisegazini lomuntu, amaseli ahlukile ngokubukeka nemisebenzi. Umsebenzi oyinhloko we-leukocytes ukuvikela umzimba womuntu. Bakha ama-antibodies asebenza ngokubambisana ekusebenzeni kwesimiso somzimba womzimba kunoma yimuphi umuntu. Ama-leukocytes akwazi ukubhubhisa izakhi eziyingozi emzimbeni wegazi.
Ngokuqondene nokwakheka kokulinganisa kwama-leukocytes, kubaluleke kakhulu kunezinye izingxenye zegazi lomuntu. Uma udlula ukuvivinya umchamo, ungakwazi ngisho nokubuka ukuthi uzizwa kanjani namuhla. Izivivinyo "ezimbi" zingachazwa, njengoba zisho, ngamehlo ngaphandle kokungenelela kwe-laboratory.
Uma okuqukethwe kwe-leukocyte emcimbini ngesikhathi sokukhulelwa kudlula inani elivumelekile, umchamo uzoba yi-turbid, futhi isilwane esivulekile esingavamile singawela phansi. Amaseli amhlophe egazini amhlophe ewesifazane okhulelwe athi, mhlawumbe, kukhona ukuvuvukala kwe-vulva, i-urogenital tract, ubulili. Futhi nokuthi awulungile emsebenzini wezinso. Uma kutholakala izimpawu ze-vulvitis noma i-vaginitis ayitholakali, khona-ke isazi sezinzwa kufanele siboniswe ngokuphuthumayo futhi sihlolwe.
I-leukocyte ephakeme emcinini wesifazane okhulelwe kungasho ukuthuthukiswa kwe-cystitis, izinqubo zokuvuvukala kulesi sifo. Ngokuvamile kwenzeka ukuthi izifo ezinjalo zingenzeka ngokuphelele ngaphandle kwezimpawu. Futhi ngesinye isikhathi ngalezi zifo kukhona ukuvuthwa okuvamile, okubuhlungu.
I-Cystitis kubesifazane abakhulelwe ivame ukuphathwa kahle futhi ngokushesha. Ezinsukwini eziyishumi, lesi sifo singaphulukiswa ngempumelelo, futhi ngeke sithinte impilo yengane ezayo. Isifo esiyingozi kakhudlwana wesifazane okhulelwe, okungasho ukuthi inani elandayo lamaseli amhlophe egazi emcinini, yi-pyelonephritis. Lesi yisifo esingenakujabulisayo somama ozayo nomntwana. Futhi ngokuvikela kwakhe nokwelashwa odokotela kuyobe kwenziwa umzamo omkhulu.
Ekuphetheni, ngifuna ukusho ukuthi wonke owesifazane okhulelwe akagwemi ukuhlolwa okuvamile, ngoba ukuxilongwa ngesikhathi esifanele somzimba wakho kuyisibopho sokuzalwa komntwana onempilo enhle, kanye nesidingo sokugcina impilo yakho ezingeni eliphezulu. Ngifuna ukufisa into eyodwa: ukuthi uzikhathalele wena nomntanakho!
Amandla owesifazane ukuzala abantwana
Ukuqhuba ukukhulelwa owesifazane onempilo
Ukuvimbela izifo ezinzima zokuphefumula ekukhulelweni
Amaprotheni emcimbini ngesikhathi sokukhulelwa
Ukuxilongwa kwe-Ultrasound ku-trimester yokuqala yokukhulelwa
Ukulethwa okubuhlungu kanye nezeluleko odokotela
Indlela yokwenza izinwele ngokuqondile ngaphandle kokufaka izinsimbi?
Indlela yokuthambisa ingane kusuka kumabhoyi
Izakhiwo zokwelapha nezomlingo we-heliotrope
Iresiphi yomsakazo womshado enezithombe
Ukunakekelwa kwezokwelapha ukulimala kwezemidlalo
Yenza kahle ukulungiswa kwesisindo
Izinkinga: ukuhlubuka emndenini
Indlela yokukhetha i-multivariate ekwenzeni ukudla okuhlwabusayo nokuphilile
Ama-bhisikidi ane-oat flakes ne-chocolate
Indlela yokupheka i-corn porridge